နှစ်သစ်ကူးပြီ…………….မောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှစ်သစ်ကူးပြီ…………….မောင်
Posted by အောင် မိုးသူ on Dec 19, 2014 in Creative Writing, Short Story | 24 comments
နံရံမှာကပ်ထားတဲ့ နာရီသံက ကျွန်မကိုကျီစယ်နေသလိုလို။ ဒီနေ့က ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ရက် တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၄ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ရက် ၊ ည (၁၀)နာရီတိတိကို ထိုးပြီမောင်။ အခန်းဝက ကန့်လန့်ကာက တစ်ချက်လှုပ်ခါသွားတာ ကြည့်ပြီး မောင်များလားလို့ မသိစိတ်က ကျွန်မထင်မိလိုက်သေးတယ်။ ပြီးမှ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်ထိန်း တစ်ချက်ပြုံးပြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီး ဖြေသိမ့်လိုက်ရတယ်။ ဆောင်းရာသီရဲ့ မြောက်ပြန်လေက တစ်ချက်တစ်ချက် တိုက်ခတ်လာတယ်။ တိုက်ခတ်လာတဲ့လေနဲ့အတူ ခြံရှေ့က သစ်ခွပင်တွေဆီက သစ်ခွနံ့ခပ်သင်းသင်းက ကျွန်မဆီကိုတိုးဝင်လာတယ်။ သြော် ဟုတ်ပါရဲ့။ သစ်ခွတွေတောင် ပွင့်နေရောပေါ့။ သစ်ခွပင်တွေကြားထဲမှာ ကျွန်မလမ်းလျှောက်နေလိုက်တယ်။ တစ်ဖက်က ကျွန်မသိပ်နှစ်သက်တဲ့ ဒန်ဒရိုဗီယမ်သစ်ခွ နဲ့ မိုကာရာသစ်ခွတွေ ၊ တစ်ဖက်က မောင်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဗန်ဒါ နဲ့ ကတ်တလီယာသစ်ခွတွေ။ ဆောင်းညရဲ့စိုစွတ်စွတ်မြူတွေကြား ပွင့်နေကြလိုက်တာ။ ကျွန်မလက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်မိတော့ (၁၀)နာရီခွဲ။ အိမ်ရှေ့လမ်းမမှာ အဖွဲ့လိုက် အဖွဲ့လိုက် ပန်းခြံသွားသူသွားနေကြပြီ။ သည်လိုနေ့မျိုးမှာ တစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာရှိမနေသင့်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မသိလိုက်တယ်။ သစ်ခွပင်တွေဆီက ဒန်ဒရိုဗီယမ်းသုံးခိုင် ၊ မိုကာရာ သုံးခိုင် ၊ ဗန်ဒါသုံးခိုင်နဲ့ ကတ်တလီယာ နှစ်ခိုင်ကို ကျွန်မအသေအချာဖြတ်ကာစည်းပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ဘယ်တော့မှန်းမသိတဲ့ ဝေဝါးမှုနဲ့ ချန်ခဲ့လို့
ကျန်ခဲ့ရတာထက်စာရင်. . .
ပြန်မလာတော့ဘူးလို့ အပြတ်ပြောသွားမှာကိုသာ လိုချင်မိတော့တာပဲ။
မျှော်ရတဲ့ မောပန်းမှုက မခံစားနိုင်သူအတွက်တော့ ပြင်းထန်စွာ နာကျင်စေတယ်။ မွန်းကျပ်စေတယ်။
မပြတ်ဘဲ ပုပ်ရိ လှိုက်စားနေစေတဲ့ လက်တစ်ဖက်ထက်တော့
အကိုးအကားများရှိ ပါသလား ခည
ကျတော် ဒန်ဒရိုဗီယမ်ရယ် ဗန်ဒါရယ် မိုကာရာရယ် အပင် ၇၀လောက်တစ်ယောက်တည်း စိုက်ဖူးပါတယ်။
အမေ ရဲ့ အကူ ပါသေးတယ် မဟုတ်လား မာမီ ရဲ့ ဘွိုင်း လေးရဲ့။
ဇာတ်လမ်း ထဲ က သီချင်း က ရှေးတုန်း က “Lခွန်းရီ” သီချင်း။
အခု ဘယ်သူပြန်ဆိုထားလို့ သိနေတာလဲ ကွဲ့။
ဇာတ်သိမ်းမှာ လေးနှစ်၊ငါးနှစ် ကလေး က ညကြီး မင်းကြီး ဘယ်နှဲ့ကြောင့် အပြင်ရောက်နေလဲ။
တစ်ခြား အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ထားလေသလား။
ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် မောင်အောင်။ :))
ဟိုး တုန်း မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ကူး တဲ့ ညတိုင်း အင်မတန် သောင်းကျန်းခဲ့တာပေါ့။
လွမ်းရမလား စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ lol:-)))
သစ်ခွပင်တွေစိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မေမေမပါတော့ပါဘူး။ မေမေက အခုကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး။ ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးက ကန်ဘောင်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သူ့မိသားစုနဲ့ပါ။ ဖတ်ရှုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။ အယ်ခွန်းရီသီချင်းကို ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်က ပြန်ဆိုထားပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးဆိုတာနားထောင်ဖူးပါတယ် ဗျ။
မစ္စတာဂျွန်ပယ်ဒင်တန်လို ခြေထောက်ကျိုးသွားတာက ပိုဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်…
အတော်ပါပဲ သိချင်တာလေး မေးကျိပရဇီ
ကျနော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်က ဗန်ဒါချောကလက်ရောင် ဝယ်လာဒယ်
ဝယ်ဂဒဲကပါလာတဲ့ အပွင့်ကတော့ ကုန်တော့မှာ
သူက ဘယ်အချိန်နဲ့ တစ်နှစ်မှာ ဘယ်နှစ်ခါလောက်ပွင့်တတ်လဲ မသိ
ပီးတော့ ဘာတွေအားဖြည့်ပေးသင့်ပါလဲ အာ့လေးတစ်ချက်လောက်သိလို့ရမလားခည
အိမ်က မျိုးမတူတဲ့ သစ်ခွ နှစ်ပင် ကတော့ အေးတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ခါလောက်ပွင့် တယ်။
အိမ်ထဲ မှာ ပန်းအိုးထဲ စိုက်ထားတာ။
ဖေဖဝါရီလ နဲ့ နိုဝင်ဘာ မှာ။
နှစ်ပင် လုံး တစ်ချိန်ထဲ အတူတူ ထပွင့်တာ။
ဒီအတိုင်း ဘဲ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ရေလေးနဲနဲ ချင်း လောင်းပေးတာ။
သစ်ခွ ဆရာ ကတော့ ပိုသိမပေါ့။ :))
ဗန်ဒါတွေဟာ စပ်မျိုးဆိုရင်တော့ ဂရုစိုက်နိုင်ရင် အပင်သန်မယ်ဆို ရာသီမရွေးပွင့်ပါတယ်။ စပ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ မျိုးစိတ်အစစ်ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်သာပွင့်ပါတယ်။
ဒါထက် မောင်က ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ၊
ဖြူဖျော့တဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ ကြယ်ကြွေတာလည်းပါတော့ သေသွားတာလား။
ကလေးလေးအကြည့်ကို ခံစားဖူးတယ်ဆိုတော့ မောင်ရဲ့ကလေးလို့ ဆိုချင်တာလား။
မိုကာရာ ဆိုတာ ခုမှ ကြားဖူးတယ်။ဘယ်လိုလေးပါလိမ့်။
မိုကာရာသစ်ခွဟာ စပ်မျိုး တီဒုံ။ ပြီးတော့ အကြမ်းခံတယ် လေရှူအမြစ်နဲ့ပါပဲ သားနောက်တစ်ခေါက် ပုံနဲ့တင်ပေးပါ့မယ်။
ခိုဖြူခိုပြာများ အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်းကာxxxxxအိမ်ခေါင်ထိပ်ဖျားမှာ နားကြပြီxxxxxxx မောင်ပြန်လာမယ့် ပြောတဲ့နေလွန်ခဲ့တာxxxxxx မိုးတွင်းလေးတစ်ခု ပြက္ခဒိန်ပေါ် ဖြတ်သွားxxxxနှုတ်ခမ်းဖျားနဲ့မလွမ်းပါရှင်xxxxနှလုံးသားနဲ့လွမ်း နေမယ်
…မောင်ပြန်လာမလား ခိုလေးအတိုင်းညည်းလို့နေxxxxxxx x
ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အမေချစ် စာရေးဆရာလေး မောင်အောင် ရဲ့ စာထဲ ပါတဲ့ သီချင်းစာသား က နားထဲ က နေ မထွက်ဘူး။
အဲဒါကို ဆို ရင်း သီချင်းနာမယ် စဉ်းစားတော့ “ဓာတ်ပြားဟောင်းတစ်ချပ်” တဲ့။
ဇာတ်လမ်း ဆက်ရရင် …
အဲဒီသီချင်းက ခင်သီတာထွန်း ရဲ့ တစ်ခါက နာမည်ကြီး ကလီရိုပါထရာ MTV ထဲ ပါတယ်။
အဲဒီ ကလီရိုပါထရာ MTV ဆိုတာ ဟော့ လွန်းလို့ ဆိုပြီး အပိတ်ခံ ရပါ့။
ဘယ်လို ဟော့ လဲ ကြည့်ချင်ရင်
နောက်တစ်ပုဒ် က ဘောင်းဘီတို နဲ့ အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ပြေးလို့ တဲ့။
အဲဒီ တုန်းက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ မကိုက်လို့ အပိတ်ခံ ရတဲ့ ပုံ တွေဆိုတာကို အခုချိန် မှာ ကြည့်ရင် ဟားတိုက် ရီကြမလားဘဲ။
ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အကြောင်း လေး တွေ ကို ဇာချဲ့ ပြီး
တကဲ့ အရေးကြီး ဆင်ခြင် ပြင်ဆင် သင့်တာတွေ ကို သတိမကပ် နိုင် ဖြစ် တတ်ကြတော့ တိုင်းပြည်ကြီး ပျက်စီးရတာမို့ …
ကြုံ တုန်း မဆီမဆိုင် “စုန်းမ စာ” ချ သွားပါတယ်။
လူ့ဘဝ တိုတို လေးပါ။
စိတ်ညစ်စရာ အမုန်းတရား အာဃာတ တွေ နဲ့ အသက်မရှု ချင်ကြပါနဲ့။
နှစ်သစ်မှာ အားလုံး အသိတရားမပြတ်ဘဲ မိမိအကျိုး ရော အများအကျိုး ကိုပါ သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ။
ကိုယ် မလုပ်ဘဲ သူများ ကို စာချသည်။ lol:-))))))))))))))))))))))
သူတစ်ပါး မကောင်းကြောင်း စဉ်းစားနေတာ ..
ငြိမ်းနေတဲ့မီး ပြန်တောက်အောင် လုပ်နေတာပဲ။
သူတစ်ပါးကောင်းကြောင်း စဉ်းစားသူသာ ..
တောက်နေတဲ့မီး ငြိမ်းစေသူလို့ ဆိုရတယ်။
( မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး )
စိတ်ကို ကျ,မကွဲအောင် သတိနဲ့ကိုင်ထားပါ – လို့ ပြောတဲ့စကားပါ။
သတိဟာ သာသနာက နံပါတ်တစ်တောင်းတဲ့ အရေးကြီးဆုံးတရား ဖြစ်တယ်။
သတိဆိုတာ လိုတယ်လို့သာ ရှိတယ်၊ ပိုတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မရှိဘူး။
ဘယ်လောက်ပဲ ပညာတတ်နေပေမယ့် “ပညာရှိ၊ သတိဖြစ်ခဲ” ဆိုတဲ့အတိုင်း သတိလွတ်နေတဲ့အခါ စိတ်စွမ်းရည်ဟာ တိုးတက်မလာပါဘူး။
သတိရှိနေမှသာ ဘ၀ခရီးကို ဖြောင့်အောင် သွားတတ်မယ်၊
စိတ်အပူ အခိုးအငွေ့ ကိလေသာနှင့် သံသရာခလုတ်ကိုလဲ ရှောင်တိမ်းတတ်မယ်။
( တိပိဋကဓရ ယောဆရာတော်ဘုရားကြီး )
ဟိုးတလောက စိုးပိုင် အမှတ်တရပွဲမှာ ပြောသွားသလိုပေါ့… ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်လို့ တည အချုပ်ထဲ နေရတဲ့ ခေတ်…. အဲဒါကို ပြောတာမလား.. အရီး…
မြန်မာနှစ်ကူးတော့ မဖြစ်နိုင်။ ၄ လလောက် လိုသေးတယ်။
အင်္ဂလိပ် နှစ် ကူး ကို ပြေတာ ဆိုရင်တော့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေ လိုက်မယ်။
ဒီနေ့ က ရင် နှစ်ကူးးနေ့ မို့ ဒီပို့ မှာ ဒီ ကွန်းမန့် ကို ရေး လိုက် တယ်။
တိုင်ရင်းသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရပါစေ။
မှတ်ချက်။ ။သတိထားမိတာ တာ ၄-၅ နှစ်ခန့် ရှိပါပြီ။ မြန်မာပြည် တွင် သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်တိုင် ထက် ခရစ္စမတ်ကို ပို ၍ အလှဆင်နေကြ သည် ကို ကရင် ဗုဒ္ဓ တစ်ဦး အနေဖြင့် ရိုးသားစွာ ၀မ်းနည်းနေရ ပါကြောင်း။
ခရစ္စမတ်တို့ဘာတို့တော့ အလေးမထားပါဘူး။ နှစ်ကူးဆိုတာကလည်း မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးမဟုတ်ပေမယ့် ဒီ ပြက္ခဒိန်နဲ့သာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက် နှစ်ကူးဆိုတာကို သတ်မှတ်တာပါ။ အဓိက ကို့ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။ ကျတော်က ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ပါ။
အမျိုး တစ်ယောက် ရဘီ….
အပင်သေသွားမှာစိုးလို့ သေချာနားမလည်တာလဲပါလို့ မလုပ်ရဲသေးဘူး
အဲ့ဒါအလှထည့်ထားတာနေမှာ အဲ့လိုစိုက်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ လေရှူမြစ်နဲ့သစ်ခွပင်ဟာ အဲသည်အမြစ်တွေကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းတဲ့ လေရမှသာ အပင်က ကောင်းကောင်းဖြစ်တာပါ။
ယောင်တောင်ပေါင်တောင် မလုပ်နဲ့တော့ :loll: